Toyota Warshad, Shirkado - Shiinaha Soosaarayaasha Toyota
Gawaarida gawaarida caadiga ah ee loo yaqaan 'Toyota1Y'
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Toyota1Y
Birta ductile birta crankshaft wareega xoojinta xoojinta ayaa si ballaaran loogu isticmaali doonaa farsamaynta crankshaft. Intaa waxa u dheer, hababka xoojinta isku dhafka ah sida xoojinta dariiqa wareega oo lagu daray joornaalka dusha sare ee joornaalka ayaa sidoo kale si ballaaran loogu isticmaali doonaa farsamaynta crankshaft Hababka xoojinta crankshaft birta been abuurka ah ayaa ka sii badnaan doona Dhulka waxaa lagu demiyey joornaal iyo geeso wareegsan.
Shirkaddu waxay leedahay teknoolojiyad casri ah iyo falanqeyn dhameystiran iyo qalab tijaabo ah. Ugu horreyn warshadaha si ay u dhaafaan ISO9001-2000 iyo TS16949: shahaadada nidaamka tayada nidaamka 2009. Hantida joogtada ah ee jirta waa 150 milyan oo yuan. Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay daboolaysaa aag 20,000 mitir murabac ah, aag dhisme oo ka kooban 28,000 mitir murabac ah, 180 shaqaale ah, in ka badan 200 nooc oo qalabka wax lagu farsameeyo iyo tijaabinta ah, 2 caaryada birta ah ee xargaha wax soo saarka ciidda lagu dahaadho, iyo 4 khadadka wax soo saarka. Nidaamka wax soo saarka iyo hababka tijaabinta waxay si adag u raacaan heerarka Jarmalka.
Gawaarida heer sare ee Toyota1FZ
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Toyota1FZ
Qalabka loo yaqaan 'crankshaft' waa mid ka mid ah qaybaha ugu caansan uguna muhiimsan ee mashiinka. Shaqadeedu waa in loo beddelo cadaadiska gaaska ee ay gudbiso usha isku xirka crankshaft ee tiknoolajiyada, taas oo loo isticmaalo awood ahaan wax soo saar shaqo, wadista habab kale oo shaqo, iyo in la wado qalabka kaabayaasha ee mashiinka gubashada gudaha si uu u shaqeeyo. Tan macnaheedu waa dardargelinta rabshadaha iyo hoos u dhaca, oo ay weheliso qallooca foorara ee sarreeya, culeyska sarreeya iyo saameynta gariirka, taasoo keenta walaac aad u sarreeya oo isbeddela. Culeyska xad dhaafka ah ee noocan oo kale ahi wuxuu u baahan yahay naqshad taxaddar iyo xisaabin ah, xulasho qalab ku habboon iyo teknolojiyadda farsamaynta dufcadda.
Wixii crankshafts soo saaray tiro badan, si loo hagaajiyo tayada wax soo saarka, hawo nitrocarburizing gaaska ku saleysan jawi nitrogen ku saleysan oo ay maamusho microcomputer ayaa la qaadan doonaa mustaqbalka. Hawada ku salaysan nitrogen-ka soo saarista gaaska nitrocarburizing waxay ka kooban tahay mashiinka hore ee wax lagu dhaqo (dhaqida iyo qalajinta), foornada horay loo sii kululeeyo, foornada nitrocarburizing, taangiga saliida qaboojinta, mashiinka dharka gadaal (dhaqida iyo qalajinta), nidaamka xakamaynta iyo gaaska qaybinta iyo nidaamyada kale.
Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay ku dhaqmaysay siyaasadda ganacsiga ee "hubinta tayada, sumcadda ku dhisan, adeegga daacadda ah, iyo ka wada faa'iideysiga", waxayna u heellan tahay raadinta horumar guud iyo horumar macaamiisheena, waxayna si kal iyo laab ah ugu mahadcelineysaa asxaabta dhammaan qaybaha kala duwan. nolosha ee haysta taageerada muddada dheer iyo daryeelka shirkadda!